Iindudumo ngu-Imagine Dragons - Izinto Zobugcisa
Iindudumo ngu-Imagine Dragons
Apha, uDan Reynolds ucula malunga nokuba namaphupha amakhulu okuba yinkwenkwezi eqongeni njengomntwana. Uyakhumbula ehlekwa ngoogxa bakhe eklasini ngenxa yamabhongo anje, kodwa kwivesi yesibini, umphambili weDragons wabhenca abo babemgculela.
Ngoku ndiyancuma eqongeni
Ngelixa ubuqhwaba iimpumlo wopha
UReynolds wachaza kwiJenali yokuHlola yeLas Vegas ukuba le ngoma imalunga nokuza kweyakho.
'' Iindudumo 'yile:' Ndonwabile ngokwenene isikolo (esiphakathi) kunye nobukho besikolo esiphakamileyo kunye nokugxothwa ekholejini, utshilo. Kubonakalisa zonke ezo zinto kwaye uthi, 'Kulungile, ndonwabile ngayo yonke loo nto kuba indizise kule ndawo ndikuyo. Yenza ubushushu ngaphakathi kum obenza ubugcisa. ''
Ingoma yaveliswa ngokudibeneyo ngu-Imagine Dragons kunye no-Alex Da Kid, owaziwa kakhulu ngentsebenziswano yakhe no-Eminem noRihanna ('Thanda indlela oyixokayo'). Usebenze ngokusebenzisana rhoqo neeDragons okwethutyana ngoku kwaye wasebenza kwiqela leqela elidlulileyo elibetha phambili kubandakanya ' Ukusasazeka ngemitha , '' Iidemon , '' Ndifun 'iintlungu.'
Ingoma evakalayo yehlobo likaJeep lehlobo lika-2017 'One Drive'. Intengiso iqinisekisa ukuba inkululeko ayikude kude nevili lophawu lweSUV. Ingoma ikwaboniswa kwintengiso ye-Microsoft Surface Laptop 'Enamandla', eyathi yasasaza kwiinyanga ezimbalwa kamva.
Ividiyo yomculo yayikhokelwe nguJoseph Kahn (Eminem kunye noRihanna 'Thanda indlela oyixokayo', Taylor Swift's 'Jonga into ondenze yona ndiyenze') kwaye wadutyulwa eDubai. Ikliphu inika uDan Reynolds esenza ngelixa ezinye izidalwa ezothusayo zijikeleza imizimba yazo ngazo zonke iindlela ngeendlela ezingaqhelekanga.
Siyazi ukuba sifuna indawo esingqongileyo kuyo, okanye into esinokuthi siyijike ngendlela eya kuthi ithathwe njengomphambukeli, utshilo uReynolds. Irediyo yeABC . 'IDubai inesakhiwo esingaqhelekanga, uyilo olumangalisayo kunye nemihlaba.'
NguDan Reynolds ocula le chorus yengoma ephezulu kunenye yeentombi zakhe ezintathu- iTolo, uGia kunye noCoco.
'Iyahlekisa' kuba abantu abaninzi bandibuze ukuba yile ntombazana yam ineminyaka emihlanu icula 'iNdudumo' kuyo, utshilo uReynolds Irediyo yeABC , Ebhekisa kuTolo. 'Ngokwenene lilizwi lam endandilibekile!'
'Iindudumo' zangena iveki yayo yama-52 kwi-Hot 100 yomhla we-5 kaMeyi ka-2018. Yayiyingoma yesine kaDragons ukuchitha unyaka ubuncinci kwitshathi, impumelelo engazange ibonwe. Ibhendi yayisele isisenzo sokuqala ngezi zintathu: 'Iiradioactive,' 'iidemon,' kunye 'neKholwa.'
Ngaphandle kwawo wonke umsindo wam ndiseyimpuku nje ehokweni
uyakhumbula umoya womoya nomlilo lyrics
nguwe lo kudala ndilindile ukufumana
ndiluhlaza okwesibhakabhaka ukuba bendiluhlaza ndingafa
nyana ungandidlalela inkumbulo